Weebly: Marti galinta Goob fudud oo layaableh iyo CMS | Martech Zone
Weebly: Marti galinta fudud ee fudud ee martigelinta iyo CMS
Arbacada, Maarso 31, 2010 Sabtida, Juun 27, 2015 Douglas Karr
Markii uu saaxiibkay Jenni ii sheegay in saaxiib wadaag ahi ay kala hadleen sidii ay u bilaabi lahayd degel Weebly, adeeg martigalin bilaash ah iyo nidaamka maareynta waxyaabaha (CMS), runtii waxaan siiyay waqti adag. Kaliya waan ogaa in aan dabeylo u socdo habeenki oo dhan si aan u hirgeliyo goobta wanaagsan ee loogu talagalay iyada oo loogu talagalay Right On Inbox, a emaylka wakaaladda fidinta.
Khibradda Weebly waxay ahayd mid iska soo horjeedda! Waxaan awooday inaan nuqulo oo dhajiyo HTML iyo CSS, isticmaalno xadhkaha fudud ee Weebly (tusaale ahaan, waxa la dhigayaa %% CONTENT %%), oo aan faylalka ku galiyaa adeegsigooda fudud ee isticmaalaha.
Tafatirka nuxurka waa Wax Kabadbadel Meesha Nidaamka qaabka - waa wax nidaam kasta oo maareynta maareynta ahi ay tahay inuu hirgeliyo. Taasi waa, waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddel ku sameyso macnaha guud ee bogga si aad dhab ahaan u arki karto sida ay u egtahay. Looma baahna in horay loo sii eego ama dib iyo gadaal loogu noqdo tifaftir. Sawirka soo galiyay xitaa wuxuu dhigay sawirada qaraabada goobta isla markaana wuxuu ilaaliyay isla magacyada sawirka, marka xitaa uma baahnin inaan wax ka badalo.
Natiijadu waa mid cajiib ah. Waxaan awooday inaan ku dhiso goob si xirfadaysan loo qaabeeyey arrin 30 daqiiqo ama sidaas ah. Aad ayaan ula dhacay! Iyo xulasho aad u tiro badan oo ah mawduucyo horay loo sii qorsheeyay, foomam, warbaahin gundhig ah iyo xulashooyin maadooyin ah, uma baahnid inaad noqotid xirfadle si aad u dhisto websaydhkaaga. Waxa kale oo jira kootooyin xisaabeed oo la heli karo oo leh xulashooyin dheeri ah (iyo in laga saaro isku xidhka Weebly footer).
Eeg Indy Daawade oo aad iska qorto joornaalkooda!
Tags: indy daawadeweeyal
Isku-darka Falanqaynta OpinionLab iyo Tijaabada
R. Brennan Guntin
Apr 1, 2010 at 7: 35 AM
Goobtu waxay umuuqataa mid layaableh! Marnaba ma aanan ogeyn in Weebly uu awood u leeyahay natiijooyinka noocan oo kale ah ee xirfad-raadinta ah in kasta oo, haddana, weligay kama habaabin wixii ka dambeeya qaab-dhismeedka la siiyay.
Apr 1, 2010 at 8: 02 AM
Waan ku faraxsanahay inaan ku siiyo xoogaa calaamado ah boggeyga iyadoo aan la'yahay xirfado farsamo! Mar labaad waad ku mahadsan tahay kaalmadaada!
Apr 1, 2010 at 7: 21 PM
Waan ku faraxsanahay inaan maqlo Weebly si fiican ayey kuugu shaqaysay! Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maqalno jawaab celin kasta oo aad hayso.
Sep 28, 2011 at 9: 31 AM
ma jirtaa hab lagu kala beddelo inta u dhexeysa koodhka iyo naqshadeynta walxaha horay loogu dhigay bogga?
Sep 28, 2011 at 3: 24 PM
Haa, waxay leeyihiin wax ka bedel fudud oo fudud oo ku saabsan shaqeynta goobta. Ma aha wax aad u adag, laakiin waa quruxsan goobta aasaasiga ah.